आज मन्त्रिपरिषद् बैठक, टुंगिएला लकडाउनको मोडालिटी ? - Vishwa News
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक, टुंगिएला लकडाउनको मोडालिटी ?
काठमाडौं । साविकको जस्तै लकडाउनले न संक्रमण रोक्न सक्यो, न जनजीविका सहज भयो । यस परिस्थितिमा लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । अपरान्ह २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । आजको बैठकको मूय एजेन्डा जारी लकडाउनलाई कसरी निरन्तरता दिने र जनजीविका सहज बनाउने भन्ने हुनेछ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चैत ११ गतेदेखि नेपालभर लकडाउन घोषणा गरिएको छ । लकडाउन घोषणा गर्दा एक जनामा कोरोना भाइरस देखिएकोमा अहिले यो संख्या ४ हजार नाघेको छ । जसले गर्दा कोरोना रोकथाममा सरकार पूर्णतया असफल भएको छ । उता, लामो समयदेखिको लकडाउनले अधिकांश मानिसको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ ।
यसले दैनिक कमाएर पेट पाल्नुपर्ने वर्गा अझ ठूलो समस्यामा रहेको छ । विभिन्न तहबाट लकडाउनको उंल्लघन गर्ने माहोल समेत बढेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा बुझाइसकेको छ । दुई सातालाई एक चरण मान्दै पाँच चरणमा लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छ ।
अप्रिलपछि चीनमा सोमबार एकै दिन सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिए